နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေး မူဝါဒများအနက် သုံးခုကို ရွေးချယ်ရမည်ဆိုပါက နိုင်ငံနှင့် ကိုက်ညီပြ? - Yangon Media Group
ကျန်ရှိသည့် အစိုးရသက်တမ်းအတွင်း အောင်မြင် အောင်ဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒ မျှော်မှန်းချက် ၁၂ ချက်အနက် သုံးခုရွေးချယ်ရမည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကိုက်ညီပြီး ပြည်သူများကို အလုပ်ပေးနိုင်မည့် ကဏ္ဍများကိုသာ ရွေးချယ် ဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မောင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေ ၁၁ ရက်က နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်သည့် CEO Conference 2018 တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် စီးပွား ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့်စည်းမျဉ်းများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ Panel Discussion တွင် ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိနေသည့် အစိုးရသက်တမ်းအတွင်း အသေးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ယခင်ကာလများထက် တိုးတက်စေရန် စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်များကို စက်မှု ထုတ်ကုန်အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကာ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍသည် နိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုများခြင်း ကြောင့် ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ် ကြောင်း ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင် မောင်ဝင်းက ပြောသည်။
”ကျွန်တော်တို့ ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒတွေထဲမှာ အားလုံးပါနေတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အားလုံးက မှန်နေမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုက်ညီတာ တွေက လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းနဲ့ အခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာ ပေါ်လာပါတယ်။ ပေါ်လာတာတွေကို ဇောက်ချပြီး ဖိပြီးတော့ လုပ်လိုက်ရင် အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်ပါတယ်။မူဝါဒ ၁၂ချက်စလုံး ငါးနှစ်အတွင်း အောင်မြင်ဖို့ ခက်ခဲမှာဖြစ်လို့ ငါးနှစ်ကာလအတွင်းမှာ ၁၂ ချက်ထဲက သုံးချက် အောင်မြင်လုပ်ဖို့ ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကိုက်ညီပြီး လူအများကြီးလည်း အလုပ်ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မူဝါဒနဲ့လည်း ကိုက်ညီတယ့် ကဏ္ဍတွေကို ရွေးချယ်ဖော်ဆောင်သွားမယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တာဝန်သည် တိုင်းပြည်စီးပွားရေး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပြီး အစိုးရက စီးပွားရေးများဝင်လုပ်မည့်အစား စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်လိုသည့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်ကိုင်ခွင့် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးသင့်ကြောင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၏ ဧည့် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်က ဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြောသည်။ ‘အစိုးရအနေနဲ့မူဝါဒသစ် တွေ ခဏခဏထုတ်နေရင် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေက လုပ်ရကိုင်ရတာ ခက်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ အားလုံးက မူဝါဒကို မကြောက်ဘူး။ ကြောက်တာက မူဝါဒမငြိမ်တာကို ကြောက်တာ။ မူဝါဒက တစ်နေ့တစ်မျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင် ပုဂ္ဂလိကတွေခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် မူဝါဒတွေများများ မလုပ်ပါနဲ့။လုပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ ထိရောက်အောင် လုပ်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။
နိုင်ငံစီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်တွင်း၌ မြေယာနှင့် အလုပ်သမား ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး ပြည်ပကုန်သွယ်ရေး မတည်ငြိမ်မှု၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒ အပြောင်းအလဲများ၏ ရိုက်ခတ်မှုစသည့် အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်နေရ ကြောင်း ဒုဝန်ကြီးကဆိုသည်။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အခွန်နှင့် ပတ်သက်သည့် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် ဆောင်ရွက်နေပြီး ပြဋ္ဌာန်းနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ NLD အစိုးရအနေဖြင့် အသေးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းများအား ပံ့ပိုးကူညီပေးရန်၊ လယ်ယာစက်မှု ကဏ္ဍချိန်ခွင်လျှာညီသည့် စီးပွားရေး ပုံစံဖော်ထုတ်ရန်၊ အခြေခံစီးပွားရေးအဆောက်အအုံများ လျင် မြန်စွာ တိုးတက်လာစေရန် စသည့်အချက်များ အပါအဝင် စုစုပေါင်းစီးပွားရေး မူဝါဒ ၁၂ရပ်ကို ချမှတ်ထားခဲ့သည်။
ရခိုင်အရေး နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများ၏ တစ်ဖက်သတ် စွပ်စွဲခံနေရမှုမှာ ပြည်တွင်း စီးပွားရေးကို ရို??